नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : आपतकालिन स्थितिको घोषणा गर्दै, कोरोनाको नियन्त्रणका लागि एक्सनमा उत्रिएको बताउँदै के के भने राष्ट्रपति डाेनाल्ड ट्रम्पले देशवासीका नाममा ?
आपतकालिन स्थितिको घोषणा गर्दै, कोरोनाको नियन्त्रणका लागि एक्सनमा उत्रिएको बताउँदै के के भने राष्ट्रपति डाेनाल्ड ट्रम्पले देशवासीका नाममा ?
अमेरिकी राष्ट्रपति डाेनाल्ड ट्रम्पले देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै अमेरिका भर इमर्जेन्सी लागु गरेका छन । काेराेना भाईरसका कारण ४१ भन्दा बढीको ज्यान गएको अमेरिकामा हालसम्म ५० मध्ये ४८ वटा राज्यमा कोरोनाको सँक्रमण देखिएको छ । १७०० भन्दा बढी मानिसमा कोरोना भाईरस सँक्रमण देखिए पछि अमेरिकी सरकारले देशभर इमर्जेन्सी अर्थात आपतकालिन स्थितिको घोषणा गर्दै यसको नियन्त्रणका लागि एक्सनमा उत्रिएको छ । आपतकालिन स्थितिको घोषणा गर्दै, कोरोनाको नियन्त्रणका लागि एक्सनमा उत्रिएको बताउँदै के के भने राष्ट्रपति डाेनाल्ड ट्रम्पले देशवासीका नाममा ? हेर्नुस भिडियो :